Amanqaku kaJessica Hawthorne-Castro Martech Zone |
Amanqaku ngu UJessica Hawthorne-Castro
UJessica Hawthorne-Castro, CEO we I Hawthorne, ibeke ngobuchule iarhente kwindawo ephambili yotshintsho olutsha lwezentengiso apho ubugcisa buhlangana nesayensi. Ukusuka kuyilo kunye nemveliso ukuya kwimidiya kunye nohlalutyo, uJessica uzibophelele kumgangatho weprimiyamu kunye nokuyila kuzo zonke iinkalo zearhente. Indima yakhe ikakhulu ibandakanya ukukhuthaza ubudlelwane bexesha elide nabathengi ukuphuhlisa imikhankaso yentengiso enobuchule kunye nomlinganiso, eyilelwe ukuphendula ngokukhawuleza abathengi.
Ukuzonwabisa nge-Omnichannel yoLwesihlanu oMnyama kunye noMvulo weCyber
NgoLwesibini, Novemba 7, 2017 UJessica Hawthorne-Castro
Akukho mbuzo malunga naloo nto, ukuthengisa kutshintsha utshintsho olunamandla. Ukuhamba rhoqo phakathi kwawo onke amajelo kunyanzela abathengisi ukuba baphucule ukuthengisa kwabo kunye neendlela zokuthengisa, ngakumbi njengoko besondela kuLwesihlanu oMnyama nakwiCyber ​​Monday. Intengiso yedijithali, ebandakanya i-intanethi kunye neselfowuni, ngokucacileyo ziindawo eziqaqambileyo kwintengiso. ICyber ​​ngoMvulo ka-2016 ibanga isihloko sosuku olukhulu lokuthengisa kwi-Intanethi kwimbali yase-US, ene- $ 3.39 yezigidigidi kwintengiso ye-Intanethi. ULwesihlanu omnyama wafika
Ukuhambisa umabonwakude kuLuhlu oluPhakamisayo
NgoLwesine, Aprili 13, 2017 UJessica Hawthorne-Castro
Ukutsala abathengi abatsha ngelixa uphucula umfanekiso wegama elipheleleyo ngumceli mngeni oqhubekayo kubathengisi. Ngomhlaba osasazekayo wemithombo yeendaba kunye neziphazamiso zovavanyo oluninzi, kunzima ukulungelelanisa iminqweno yabathengi ngemiyalezo ekujoliswe kuyo. Abarhwebi abajamelene nalo mceli mngeni bahlala bejika "bayiphose eludongeni ukuze babone ukuba iyabambelela na" endaweni yesicwangciso esicwangcisiweyo. Inxalenye yesi sicwangciso kufuneka ibandakanye nemikhankaso yentengiso yeTV,
NgoLwesine, Julayi 7, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 UJessica Hawthorne-Castro
Njengokuba iindlela zentengiso yedijithali zisanda kunye nokuziphatha okubi, iinkampani zifaka imali ethe kratya kwintengiso zikamabonwakude ukufikelela kubabukeli abachitha iiyure ezingama-22-36 bebukele umabonwakude veki nganye. Ngaphandle kwento enokuthi ishishini lentengiso lingakhokelele ekubeni sikholwe kule minyaka imbalwa idlulileyo icacisa ukwehla komabonwakude njengoko sazi, intengiso kamabonwakude isaphila, kwaye ivelisa iziphumo eziqinisekileyo. Kuphononongo lwakutshanje lweMakethi oluhlalutya ukusebenza kwentengiso kuwo onke amashishini nakwimithombo yeendaba ezinje